All mkpa ka ị mara banyere iCloud
Ụzọ atọ ka Download iCloud ndabere mfe.
Top 5 iCloud Alternative maka Android
Olee otú mmekọrịta iCloud Kalinda na android ekwentị na Tablet
Na-awụlikwa elu mmiri iji Android ma na-ahapụ na kalenda iCloud? Ị na-adịghị na ya. Isiokwu a gosiri gị otú mmekọrịta iCloud Kalinda on Android ngwaọrụ mfe. GỤKWUO >>
Ihe site Thomas Jones | 06.11.2015
Nyefee music si iCloud ka Android dị nnọọ mfe iji MobileTrans. Iji malite,-eso nke a dị mfe usoro GỤKWUO >>
Ihe site Selena Lee | 02.11.2015
Ọ bụrụ na ị na-achọ ụzọ ndị i nwere ike uzo na iCloud ebighị mkpọchi, anyị ga-ekere òkè dị mkpa banyere otu ihe ahụ. Mgbe ụfọdụ, o nwere ike otú ime ka ị ga-ahụ mkpa bypa GỤKWUO >>
Ihe site Selena Lee | 26.10.2015
Nke a ndu-egosi na ị na ụzọ abụọ ka ihichapụ foto site na iCloud. Ị nwere ike ịhọrọ ma nke ha ka ha na-ehichapụ achọghị foto ndị si gị iCloud. GỤKWUO >>
Ihe site Selena Lee | 24.10.2015
Isiokwu a tumadi na-egosi gị otú ị mbupụ iCloud kọntaktị na Outlook-enweghị a ikedo. Na-agụ na isiokwu a na-agbalị ya onwe gị. GỤKWUO >>
Ihe site Thomas Jones | 14.10.2015
iCloud-enye gị ohere weghachi gị iPhone, iPad, na iPod aka metụ ya ndabere faịlụ. Soro nzọụkwụ ke ibuotikọ ịmụta otú weghachi iPhone, iPad, na iPod si iCloud ndabere. GỤKWUO >>
mbupụ niile ma ọ bụ kọntaktị ahọrọ zọpụta na gị iPhone si ebe nchekwa, iCloud, Exchange na ndị ọzọ ndekọ a CSV faịlụ, na-emeghe CSV maka edezi ma ọ bụ na-ebi akwụkwọ ... GỤKWUO >>
Ihe site Thomas Jones | 12.10.2015
Ọ mbụ e-e mere na i nwere ike rụọ ọrụ gị iPhone ma ọ bụ iPad enweghị enyemaka nke a na kọmputa. Site n'enyemaka nke iCloud ugbu a ị pụrụ nanị atụgharị na ngwaọrụ gị, abanye na na gị Apple ID Gụọ More >>
ICloud Photo Ịkekọrịta bịa wuru na ọ bụla iPod, iPad ma ọ bụ IPhone nke nwere iOS 7 ma ọ bụ iOS 8 ruo ụbọchị. GỤKWUO >>
Top 8 iCloud uzo Ngwaọrụ
N'okpuru ebe a bụ n'elu 8in okwu nke arụmọrụ. Ngwá ọrụ ndị a na-arụ ọrụ nke ọma na-enyere gị uzo iCloud. Ka anya na onye ọ bụla n'otu n'otu. GỤKWUO >>
Na ntọhapụ nke iCloud otu onye anaghị kwesịrị ịna-ya akwụkwọ ya laptọọpụ ma ọ bụ kọmputa nchekwa na faịlụ. GỤKWUO >>
iCloud bụ elu-ụbọchị collection nke Apple na ígwé ojii Mgbakọ ọrụ. Ị nwere ike ịkekọrịta ihe ọ bụla site na nke a ọrụ n'etiti ihe iPhone, iPod, iPad na Mac. The ozi nile ngwaọrụ bụ automatica GỤKWUO >>
Apple Inc ẹkenam iCloud nchekwa usoro maka iDevice ọrụ na-echekwa dijitalụ data na ntọala. The apple id onye ọrụ na-akawanye 5GB free nchekwa ma ọ dị mkpa ọrụ nwere ike nweta nkwalite nchekwa site n'ịṅa kwa ọnwa ụgwọ. GỤKWUO >>
Chọrọ iji iCloud na gị Android ngwaọrụ? Ọ bụghị agaghị ekwe omume. Ị nwere ike ịchọta n'elu 5 iCloud uzo ozo maka Android site n'inyocha isiokwu a. GỤKWUO >>
Chọrọ nyefee iCloud data gị Android ngwaọrụ? Isiokwu a gosiri na ị a ngwa ngwa na ụzọ dị mfe. Ego na na-eso ya ugbu a! GỤKWUO >>
isiokwu show ị ọtụtụ ụzọ maka nyefe nke music si iphone ka iCloud. GỤKWUO >>
Ọ bụrụ na ị kwadoo kọntaktị gị ka iCloud, mgbe ahụ, mgbe ị kwesịrị ya, ị nwere 4 nhọrọ iji weghachite kọntaktị site na iCloud. GỤKWUO >>
Chọrọ mmekọrịta iCloud na Android ngwaọrụ? Isiokwu a na-agwa gị otú ị ka mmekọrịta kọntaktị, ozi ederede, videos, photos, ọdịyo faịlụ na oku na ndekọ si iCloud ka Android. GỤKWUO >>
Olee otú m Lee ihe na-na m iCloud na otú nweta iCloud ndabere faịlụ? Ọ bụrụ na ị nwere otu ajụjụ ndị a n'uche, lelee nkọwa na isiokwu a. GỤKWUO >>
Na Mbụ 1 2 3 Ọzọ